IBrazil kunye nee-biofuels | Ukuhlaziywa okuluhlaza
IBrazil kunye nee-biofuels
Adriana | | Izinto eziphilayo, Biodiesel, Umoya ovuselelekayo
Brasil Lelinye lawona mazwe abaluleke kakhulu kwiLatin America ngenxa yobungakanani bayo kunye noqoqosho olukhulu olonyuswa ngamandla alo zendalo. Kodwa ikwayenye yeyokuqala kwingingqi ukufuna ezinye iindlela zokubasa.
Ukusukela ngo-2005 iBrazil yavelisa Iibhayoloji kwaye ikhuthaza eli shishini ukuba libonelele uninzi lwentengiso yasekhaya, ngakumbi oomatshini bezolimo kunye nezithuthi ezinzima. Ngumvelisi wesibini ngobukhulu we-bioethanol emhlabeni eneelitha ezingama-26 ezigidigidi kunye ne-1,1 yezigidi zeelitha ze-biodiesel ngo-2009.
Ngo-2010 kuqikelelwa ukuba iya kuvelisa i-2400 billion yeelitha ze-biofuels.
IBrazil iceba ukuba ngomnye wabavelisi be-biofuel ebaluleke kakhulu kwihlabathi. Yiyo loo nto kuninzi kutyalomali kolu shishino kodwa ikwanceda amafama ukuze athathe inxaxheba kwimixokelelwano yemveliso kunye neemveliso zabo.
EBrazil, izityalo ezahlukileyo zisetyenziselwa ukwenza i-biodiesel enje ngeembotyi zesoya, ummoba, icassava, ijatropha kwanentsalela yeebhanana, ukhula lwaselwandle, phakathi kwezinye.
IBrazil ayifuni ukubeka emngciphekweni ukhuseleko lokutya Ke ngoko, iyavumelana nabalimi ukuze bangatshintshi imveliso yabo kodwa nganye inikezele ngecandelo.
Umbuso waseBrazil uqhuba imigaqo-nkqubo eyahlukeneyo yokunyusa imveliso, ukugcinwa, kunye nokuthuthwa kwee-biofuels ezifumana inzuzo eninzi kwaye zinokuthi zithathe indawo ye-biofuels. iifosili, kunye nokudala imisebenzi kweli candelo.
Ngenxa yempembelelo yombuso, inani elikhulu leenkampani zangaphandle zityala imali kwii-biofuels kweli lizwe, ngaloo ndlela kusebenze uqoqosho.
I-Brazil iyakuba ngumdlali ophambili kwimarike ye-biofuels kule minyaka izayo ngenxa yabo bonke ubutyebi obunokubakho kunye nobutyebi bendalo obunabo kummandla wayo kunye nokubanakho ukusebenzisa ithuba lokuthelekisa kwaye ukhuphisane.
Ukufezekisa ezolimo ezizinzileyo nezendaloUkugcina ukhuseleko lokutya nokuvelisa izixa ezikhulu zebhayoloweli ixesha elide zezinye zeengxaki ekufuneka iBrazil kunye namanye amazwe avelise amafutha ukuze bakwazi ukugcina uqoqosho, intlalo kunye nokusingqongileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Izinto eziphilayo » Biodiesel » IBrazil kunye nee-biofuels
Ngexesha lenkqubo yakhe yokuzivelela kwezinto, umntu ulawule indalo, wayenza umthombo wakhe wokutya namandla. Ngaphezulu kweminyaka engama-20000 XNUMX eyadlulayo waqonda ukuba angasebenzisa iinkuni kunye nezityalo ezomileyo ukupheka ukutya kwakhe kunye nokuzibonelela ngobushushu kwimozulu ebandayo. Le nkqubo ibiyindalo kuba khange iguqule amandla, imeko yendalo kunye nokusingqongileyo. Ngexesha lotshintsho kwimizi-mveliso kulapho, emntwini, enye yeengxaki ezinokuthi zikhokelele ekuphelisweni ziqala, ukusukela kule minyaka imbalwa idlulileyo, umonakalo obangelwe kwindalo sele udume kakubi, kuphela kukujonga okusingqongileyo ukwazi ukuba kukho into engalunganga. Ukungalingani okubangelwe akusekho ikakhulu kokusingqongileyo, kodwa kukwabandakanya inkalo yentlalo, ukuxhaphaza okugqithisileyo kwezixhobo zethu kuya kuba sisiphelo sentshabalalo yethu, ngoku umntu njengoluhlobo ujongene nemeko enzima kakhulu, umthombo wamandla esikholelwa kuwo ukungabinamkhawulo ngoku Ineminyaka nje embalwa ukuba iphele. Oko kubizwa ngokuba zi-fossil fuels kungena kwixesha lokunqongophala, nto leyo eya kuthi ibangele, njengoko kulindelekile, ibe yenye yeengxaki zezoqoqosho ezimandundu kula maxesha akutshanje. Ihlabathi liphela, ngakumbi amazwe ahluphekayo, liza kujongana neentlekele ezininzi, amaxabiso eemveliso aya kunyuka aye kwinqanaba elingalindelekanga kwaye ilizwe liza kuba nendlala etshabalalisayo. Inkqubo yangoku yezoqoqosho elawula uninzi lwamazwe ekugqibeleni iya kuba ngoyena nobangela wale ngxaki, injengendlu yamakhadi eza kuwa kungekudala. Ngenxa yokudityaniswa kwehlabathi okudibanisa ilizwe ngalinye kunye nehlabathi liphela, zonke ziya kubethwa ngandlela thile okanye enye kwaye ezinye zinamandla ngakumbi kunabanye. Kubalulekile ukuba ilizwe okanye ilizwe liphumeze imigaqo-nkqubo yamandla exesha elide ebakhulula ekuxhomekekeni kwimithombo yeefosili, ngakumbi ioyile. Imithombo yamandla engaqhelekanga idlala indima ebaluleke kakhulu. Kukho amandla amakhulu afumanekayo kwiplanethi yethu, amandla elanga kuphela avelisa amaxesha angama-15 amandla esiwasebenzisayo ngosuku. Lo mthombo wamandla kunye neminye emininzi efana nomoya, ulwandle kunye ne-biomass inokuba sisisombululo kule ntlekele. Kodwa ngaphandle kwemigaqo-nkqubo ecacileyo, akunakulindeleka kangako.IBrazil, umzekelo, igubungela iipesenti ezingama-50 zokusebenzisa kwayo amandla ahlaziyekayo, ngakumbi ii-biofuels. IBrazil iqonde kwangoko ukuba ilizwe linokuphumelela ngokusebenzisa indalo kunye nezixhobo ezihlaziyiweyo ngendlela efanelekileyo. Kuyamangalisa ukuba phantse i-90% yokusetyenziswa kwamandla ivela kwioyile, i-7% kumandla enyukliya kwaye yi-3% kuphela egutyungelwe ngamandla angenakuhlaziywa, kuba ayizukwothusa oosomashishini abaninzi beoyile, kuba imithombo yamandla angaqhelekanga ayivelisi nzuzo inkulu, kunye neoyile.
I-nopal yokuvelisa amandla
Phinda usebenzise iimodyuli zelanga okanye iipaneli